पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्ष काम गर्न नपाउनेगरी कालो*सूचीमा! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्ष काम गर्न नपाउनेगरी कालो*सूचीमा!
काठमाडौं ।सार्व*जनिक खरीद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई का**लो सूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी कन्स्ट्रक्सनलाई तीन वर्ष काम गर्न नपाउनेगरी कालो**सूचीमा राखेको छ ।
सडक विभागको सिफारिसमा पप्पुलाई का*लोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ । यो कम्पनीको सञ्चालक नि*लम्वित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन् । तर, अहिले उनको छोराको नाममा छ । समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद चौधरी भ्रष्टाचार अभियोगसँगै निलम्बनमा परेका छन् ।
पप्पुसँगै अन्य ५ कम्पनीलाई पनि का**लोसूचीमा राखिएको छ । तर, बाँकी ६ कम्पनीलाई भने एक वर्षे अवधि तोकिएको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने एक कम्पनीले भने नेपाल प्रहरीकै काम नगरेकाले उजुरी परेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा श्रीदेव सप्लायर्स काठमाडौंलाई एक वर्षसम्म काम नपाउनेगरी कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
निशा सम्पायर्स हेटौडा, सूर्योदय निर्माण एण्ड हाउजिङ कम्पनी, बारा कन्स्ट्रक्सन र एजबीकेसी निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकलाई पनि एक–एक वर्ष सार्व*जनिक निकायको कुनै पनि खरीद कारबाहीमा भाग लिन नसक्नेगरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।
Previous हेर्नुहोस! महराले षडयन्त्र गर्नेहरुलाई यसरी पर्दाफास गर्ने बताए!
Next कालापानी जान डराए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, छर्लंग भयाे ओली सरकारको झु**टो राष्ट्रवाद !